Saraakiil Itoobiyaan Ah Oo Lagu Dilay Gobalka Baay. – Calamada.com
Saraakiil Itoobiyaan Ah Oo Lagu Dilay Gobalka Baay.
calamada September 5, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Baay ee dhaca Konfur Galbeed ee dalka Somali ayaa sheegaya in duleedka degmada Qansaxdheera qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Saraakiisha Xabashida Itoobiya ayaa arkay miinada inta aysan qarxin balse markii ay isku dayeen iney goobta ka saaraan ayeey ku qaraxday taasi oo sababtay in gabi ahaan ay dhintaan saraakiishii Xabashida ee dooneysay iney miinada goobta ka saaraan.
Ciidamo kale oo Amxaaro ah oo la socday miina baarayaasha ayaa hilbaha saraakiisha qaraxa ku halaagsantay ka aruuriyay goobtaasi.
Dhanka kale Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in howlgal gaar ah oo ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Cabdalle Biroole ee duleedka degmada Afgooye ay ku dileen Labo askari oo ka tirsan dowlada Ridada federaalka kuwaasi oo la socday Moota’iyadoona ciidamada Muslimiinta ay soo qaniimeysteen Mootadaasi.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 03-12-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 04-12-1437 Hijri.